Ny Herinandro Tao Bahrain (03/12/06) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2017 5:28 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Desambra 2006)
Vao avy nahavitra indrindra ny fihodinana tamin'io fifidianana roa, Parlemantera sy Monisipaly, nataony i Bahrain, izay nahitàna parlemanta islamista tohanan'ny governemantan'ny maro an'isa.
Ho an'i Mahmood Al Yousif, kandidà ‘liberaly’ toaka monja no tafita ho ao amin'ny parlemanta.
“Tsy ny rehetra ankoatra ilay kandidà liberay iray no tafita ho ao anatin'ny parlemanta vaovao, izay somary nanjakan'ny toepo islamista miavaka: 17 Wefaq (Shi’a), 8 Minbar (Firahalahiana Miozolmàna) ary 5 Asala (Salafista). Manome ny 75% amin'ny isa ao amin'ny parlemanta izany, saingy rehefa jerenao akaiky ny ambiny, iray monja no liberaly, fa ny ambiny dia manana fironana islamista miavaka, ny iray amin'ireo raha ny marina (Jassim Al-Saidi) no avy amin'ny mahery fihetsika, na ny vondrona Asala aza tsy nahavita nanambara ampahibemaso hoe avy amin'izy ireo ilay zalahy io!” hoy izy nanoratra.
Kanefa, velom-panantenana i Mahmood ary mihevitra hoe fisoloantena tsy mitanila no hita amin'ilay parlemanta vaovao ao Bahrain.
“Ny tena mahabe fanantenana ahy amin'ity indray mitora iy dia toa parlemanta madio no fijery azy, Bahrain iray manoantolo – amin'ny endriny viroaly – no nihazakazaka sy nisafidy izay ho solotenan'izy ireo, tsy nisy niantso fanaovana ankivy afa-tsy ny antoko Haq, ary tsy mahasolo ny maro an'isa izy ireo.Ny mahabe fanantenana ahy ihany koa amin'ity parlemanta ity dia ny hoe nanana fandaharanasa mazava sy nambara tamin'ny rehetra ny Wefaq, ary nifidy tam-pahendrena ny vahoakany niaraka ihany koa taminà ampahany avy amin'ireo manampahaizana sy manampahefana. Hafa ankoatra izay ary noho izy ireo nihazakazaka toy ny antoko politika madio, dia ananan-dry zareo ny birao mpanohana ambadika manohana ny ezaka ataony ao amin'ny parlemanta. Izay birao mpanohana izay dia afaka mifandray feno aminìireo mpahay siansa politika amin'ny alàlan'ireo mpandraharaha mba hanome torohay azy ireo amin'izay adihevitra mahakasika ny tolodalàna sy tetibola sns…,” hoy izy nanazava.
Na dia endrika iray isehoan'ny demaokrasia aza ny fandraisan'ny vahoaka anjara, manontany tena i Babbling Bahrania raha misy toerana ho an'ny Ministera iray hisahana ny Fampahalalam-baovao ao anatin'ny tena demaokrasia.
“‘Ao anaty fitondrana jadona, tsy afaka miteny ianao. Ao anaty demaokrasia iray, afaka miteny ianao,’ hoy ny nambaran'i Mohammed Abdul Ghaffar Abdulla, minisitry ny fampahalalam-baovao [MOI].
Adinony ny nanampy hoe ‘IAo anaty fitondràna jadona, manana asa aho [MoI]. Ao anaty demaokrasia tsy manana asa aho”, hoy i Babbling Bahrania nanoratra.
Lavitry ny politika sy ny fizarazarana ateraky ny sekta ao anaty firenena iray misy vahoaka mahery kelin'ny 600.000, manoratra i Bint Battuta momba ny rikorikony tantera amin'ny fihetsiky ny olona sasany manloana ireo vahiny mpiasa avy any amin'ny firenena andalam-pandrosoana.
“Tandrefana” ny sasany amin'ireo tena meloka ratsy indrindra (tsy hita izay teny hafa entina hilazàna azy tsaratsara kokoa) izay rehefa tonga ry zareo ireny ho any amin'ny Golfa dia mipetraka ery amboniombony kokoa ao anatin'ny famaritana ny saranga, noho ny pasipaoro entiny fotsiny anefa izany. Ireo olona avy aminà fiaviana tena tsotra dia tampotampoka eo mahazo mpiasa mpanampy an-trano sy dobo filomanosana ary mihevitra izy ireo fa noho ny volonkoditra ananany dia mendrika ireo tombontsoa rehetra aterak'izany. Io koa dia mifandray amin'ilay nolazaiko momba ny teny, maro amin'ireo Barhainis nanaraka fampianarana manokana no mitondra tena toy ny hoe ny fitenena anglisy dia mampiakatra azy ireny ho amin'ny toerna ambony mitaha amin'ireo manodidina azy tsy afaka manao izany,” hoy izy.
The Bitch, bilaoger vaovao ao an-tanàna, no manome antsika ny anjara birikiny amin'ny momba ny firafitry ny fiarahamonina Bahraini,avy amin'ny fomba fijeriny sy ny fomba fihetsika sy fitondrantenan'ireo vondrona samihafa.
Tsinjarainy ho vondrona samihafa ny vahoaka Barhaini, miainga avy amin'ny tontolon'ny seta sy ny foko niaviana.
Ao anaty tontolon'ny zava-manahirana erantany, Bahraini Rants no manome ho antsika ireo sakafo sasantsasany mba hisaintsainana momba ny trondro.
“Torohay tsotsotra raisina kianjoanjo ho anao momba ny trondro iray malaza: ny “Chilean Seabass” raha ny marina dia antsoina hoe “Patagonian Toothfish”. 30 taona lasa eo ho eo izao, nanokatra ny fari-dranomasin'i Shily ho an'ireo vahiny mpanjono i Augusto “ataoko mahita fitondrana miaramila ianareo” Pinochet, ary tsy niandry ela dia nivaivay ny fifaninana ary dia fongana ny tahirin'ireo faritra fanjonoana. Voatery mandeha lavitra mankany amin'ireo rano lalina tsy mbola voatrandraka saingy mampididoza kokoa ireo mpanjono teo an-toerana, ary any izy ireo no manao rtsy tarehy, saingy trondro fotsy iray tena be nofony (tsy fahatomombanana vokatry ny fivoarana). Matvy ny henany, midika izany fa sarotra andrahoina tafahoatra, ary mandeha fotsiny araka izay fomba ikarakarànao azy io, ary ny fahabetsahan'ny hena dia midika fahabetsahan'ny vola. Mba hamarotana ilay trondro, nilaina ny nanome anarana manintona kokoa noho ny “Patagonian toothfish”, ka dia tonga tany aminà safidy iray hafakely manahirankirana ry zareo – “Chilean Seabass”” hoy izy.
Tohizany amin'ny firesahana sakaho sy zavapisotro hafa any anatinà lahatsoratra iray tena mahaliana, mba tsy hilazàna zavatra betsaka.